Facebook Accounts hack နည်း ဇင်ကို အကောင့်ဟတ်နဲ့နော် ~ ဇင်ကို(နည်းပညာ)
myanmar aungaung 15 April 2014 at 05:03
Email, Phone, Username or Full Name ကိုပဲဖြည့်ခိုင်းနေတယ်ဗျ ဖုံးနံဖတ်ဖြည်လဲမရ Email ကိုဖြည့်လဲ မရ အဲတာကိုပဲပြနပြီးဖြင်္ည့ခိုင်းနေတယ် မှတ်ချက်။ ။ ကိုယ်ပိုင် အကောင့်ပါ လို့ကျနေတာ တနှစ်ကျော်နေပါပြီ ပြန်လိုချင်လို့ပါကူညီပေးကြပါအုံးခင်ဗျာ
Anonymous 18 April 2014 at 07:39
ဘာပဲပြောပြောအကိုရေ ဒီပို့ ကိုဖြတ်လိုက်ပါလား
အဲ့ဒါအကောင်းဆုံးဖြစ်လိမ့်မယ် လူ့စိတ်ဆိုပြောလိုံ့ရဘူးဂျ
lin htet 23 April 2016 at 06:47
Anonymous 23 June 2014 at 02:40
Anonymous 23 June 2014 at 02:48
Anonymous 26 July 2014 at 23:01
ကျွှန်တော်ဖေ့ဘွတ် ပတ်ဝက်မေ့သွားလို့ပါ။။ ဘယ်လိုမှပြန်ယူလို့မရတော့ပါဘူး။။စိတ်ညစ်ပါတယ် ကိုယ့်ပတ်ဝက် ကိုမေ့သွားတာပါ။။။။။။။။။။။။။။။။။
Anonymous 13 August 2014 at 23:59
​ကောင်းလိုက်​တာ အဲဒီအ​ကောင့်​က ကိုယ်​မသုံးပဲနဲ့ တသက်​လုံး​ပေါ်​နေမှာလား.... မသုံးတာကြာ​တော့မပျက်​ဘူးလား.... သိတဲ့လူရှိရင်​​ဖြေ​ပေးပါ​လား....
ကျွန်တော်ဖြေပေးပါ့မယ် email နဲ့ ပထမpassလေးပြော့ပပါ။
Htun Kar Aung 30 August 2014 at 09:53
Htun Kar Aung 30 August 2014 at 09:59
ဒီလိုလေး လုပ်ရင်တကယ် Hack နိူင်မ Hack နိူင် ???ကျွန်တော်ဒီ post ဖတ်ပြီးစိတ်ဝင်စားမိတာတော့အမှန်ပါ ။ ။ Thx ^_^
မှတ်ချက်။ ။ သဘောရိုးပါ။ ဖြစ်နိုင် မဖြစ်နိုင်။ ။
min min 18 September 2014 at 21:01
အကိုရေ ပြောတဲ့နည်းကရပါတယ် ဒါပေမဲ့ စက်တင်ဘာ ၂၀၁၄ မှာ security ထပ်မြငိ့လိုက်ပြီ
Parame Mone Mone 18 April 2015 at 05:55
အကို,ညီမfb acc ကို2014 Julyလောက်က ဟက်ခံလိုက်ရပါတယ်။သူကဘာနည်းနဲ့ဟက်လဲတော့မသိဘူး။ညီမ gmailကိုပဲ fb acc နှစ်ခုခွဲပစ်လိုက်တယ်။တစ်ခုကိုသူသုံးနေပြီး နောက်တစ်ခုကို ညီမpasswordချိန်းပြီးသူ့ဆီက ပြန်ယူခဲ့ပါတယ်။ညီမနဲ့သူ mailတစ်ခုကိုတူတူသုံးနေရတယ်။reportထုရင် ညီမအကောင့်ပါပျက်မှာစိုးလို့မထုရဲပါဘူး။သူသုံးနေတဲ့ ညီမနာမည်နဲ့ ညီမပုံပါတဲ့ acc ကိုပြန်လိုချင်ပါတယ်။ပြန်ရဖို့မဖြစ်နိုင်လည်းသူဆက်မသုံးရအောင်လုပ်ချင်ပါတယ်။ခုသူက nameလည်းပြောင်းမသုံးဘူး။profileလည်းမချိန်းတော့ သူငယ်ချင်းတွေကညီမလို့ပဲ အထင်မှားနေကြပါတယ်။ကူညီပါဦးရှင့်
naing min 13 June 2015 at 11:39
အကိုရေ code တောင်းတဲ့ နေရာမှာ ရွာလည်နေပီဗျ ကျော်လို့မရဘူးလားဗျ
Mee Kwey 20 January 2016 at 18:25
zaw hein 15 February 2016 at 08:53
Ph no နဲ့hackနည်းသိချင်ပါတယ်sir
mglwin bo 13 March 2016 at 18:43
goot tal i love hacker thz soo muc
nyi nyi 15 March 2016 at 02:30
nigia 18 March 2016 at 21:23
email နဲ့ confirm email မှာ အဆင်မပြေဘူး စမ်ားကည့်လိုက်တယ်
Anonymous 28 March 2016 at 07:14
အကိုရေ မရဘူးဗျာ Full Name တေ identify လုပ်ဖို့ ပုံတွေတောင်းနေတယ် အကောင့်ကို lockကျတာ ပြန်လုပ်သလိုဖြစ်နေတယ်
Chit Bo 30 March 2016 at 04:53
Ar Kar Phyo4May 2016 at 09:29
Ar Kar Phyo4May 2016 at 09:34
Su Wai3June 2016 at 06:25
ROYAL SMART 25 June 2016 at 01:19
King Qween 29 June 2016 at 21:18
Heinthuya Hty 1 August 2016 at 05:13
kyaw aung 11 October 2016 at 08:33
I FOUND A CLASH OF CLANS DIAMONDS GIVEAWAY! http://maxclashgems.com You can get the gems again and again! (vzXBV)
နေမင်း ခ5December 2016 at 03:53
security question မှန်ရင်
Myo Min 20 December 2016 at 13:36
Aristo Mhk5May 2017 at 05:38
Aristo Mhk5May 2017 at 05:41